एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया ११ गते सुरु हुने - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया ११ गते सुरु हुने
सफल न्युज द्वारा २०७८ मंसिर ८ गते बुधबार १९:५४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, मंसिर ८ गते । नेकपा एमालेको दशौँ महाविधेशन १० देखि १२ सम्म चितवनमा सुरु हुदैछ । पहिलो दिन १० गते महाविधेशनको उद्घाटन हुने छ । त्यसको भोलिपल्टै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
एमालेले महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. बिजय सुब्बाले निर्वाचन कार्यतालिका पेश गर्नुभएको हो ।
कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनमा मंसिर ११ गते उम्मेदवारी दर्ता र १२ गते मतदान हुने छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार ११ गते उम्मेदवारी दर्ता, फिर्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा हुनेछ । १२ गते विहान ८ बजे नै मतदान सुरु हुनेछ ।
एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन १० गते चितवनको नारायणी नदी किनारमा हुनेछ । त्यही दिन साँझ केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्ने सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
जनअभिमतबाट हैन्, प्रतिक्रियाबादीका कारण एमाले प्रतिपक्षमा :अध्यक्ष ओली